इटालीमा बाँया लगेज स्थानहरू कसरी फेला पार्ने | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > इटालीमा बाँया लगेज स्थानहरू कसरी फेला पार्ने
Ciao! तपाईं इटाली एक जीवनकालमा को यात्रा योजना हुनुहुन्छ! यो पुनर्जागरण को जन्म ठाउ र प्रतिज्ञा elate र किनभने कला यसको काम तपाईं प्रेरित गर्न एक शहर हो, वास्तुकला, र यसको प्रेम खानाको साथ. इटाली gastronomy होट्ल को साँचो घर हो. प्लेट बस भोजन रूपमा सेवा छैन, तिनीहरूले सिर्जनाहरू छन्. गर्दा त यो whirlwind शहर अन्वेषण छन्, जहाँ तपाईं इटाली बायाँ सामान स्थानहरू पाउन सक्नुहुन्छ?
हिड्दै cobbled सडकमा, जोश को स्पष्ट वातावरण मा भिजाने, यो एक बाल्टिन-सूची गन्तव्य बनाउँछ. को रोमान्स बिगार्न सक्छ कि मात्र कुरा तपाईं आफ्नो सामान ढोना गर्न भएको छ जसले सबैतिर तपाईंले जाने बोझ गर्न चाहन्छ किनभने? लग्जेज नि: शुल्क र आनन्दित इटालीको वरिपरि यात्रा गर्ने तरिका हो र यसो गर्न तपाईं इटालीमा बायाँ सामानको स locations्ख्याको एक नम्बरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।.
रेल परिवहन भएको इको-मैत्री मार्ग यात्रा हो. यस लेखमा द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ एक ट्रेन सेव, सस्तो ट्रेन टिकटहरू विश्व मा वेबसाइट.
सामान भण्डारण गर्नका लागि एक सुरक्षित र सरल विकल्प, एक layover मा, विमानस्थलमा छ या तपाईं एक होटल बिना निःशुल्क दिन छ भने. प्रमुख हब विमानस्थलको यो एउटा सजिलो विकल्प छ भनेर मनमा राख्न, तपाईं आफ्नो चुनिएको विमानस्थल प्राप्त अघि तर सानो विमानस्थलको हुन trickier सक्छ त आफ्नो अनुसन्धान गर्न. इटालीमा बाँया सामानहरू पत्ता लगाउन एयरपोर्टको वेबसाइटमा गएर पहिलेको जाँच गर्नु राम्रो हो.
बारी फासनो टिकटहरु
टारन्टोबाट फासानो टिकटहरू
मिलान फ्लोरेन्स टिकटहरु
भेनिस को मिलान टिकटहरु
मिलान Malpensa हवाई अड्डा हो बायाँ सामान टर्मिनल को आगमन स्तर मा स्थित छ 1. यसलाई देखि दैनिक खुला छ6छु 10 बजे. लागत भिन्न, एउटा सानो वस्तुको लागि, तपाईं बारेमा € 3.50 तिर्न चाहन्छु, about4को बारेमा ठूलो वस्तुको लागि र प्रत्येकको लागि 24 घण्टा.
रोम Fiumicino हवाई अड्डा हो बायाँ सामान टर्मिनल को भूमि तल छ 3. यसलाई देखि दैनिक खुला छ 6:30 छु 11:30 बजे र 24 घण्टे अवधि बारे6€ प्रति वस्तु खर्च हुनेछ.
भेनिस मार्को पोलो हवाई अड्डा गरेको बायाँ सामान कार्यालय जमीन तल्ला छ, पहुँच मा विमानस्थलमा टर्मिनल भित्र 1. तिनीहरू देखि दैनिक खुला छन्5छु 10 बजे, तर पटक हिउँदमा फरक हुन सक्छ.
नेपल्स टिकट को मिलान
फ्लोरेन्समा नेपल्स टिकटहरू
भेनिसदेखि नेपल्स टिकटहरू
पिसादेखि नेपल्स टिकटहरू
ट्रेन स्टेशनहरू जहाँ तपाईं बाँया सामान भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ
रोम तीन मुख्य रेलवे स्टेशन छ, Ostiense, रोम Termini, र रोमा तिबुर्तिना. तपाईले वास्तवमै छनौटको लागि बिगार्नुभएको छ जब यो इटालीमा बाँया सामानहरू भण्डारण गर्ने प्रदायकहरूको कुरा आउँदछ.
यदी तिमी ट्रेनको माध्यमबाट पार गर्दै दिन को लागी, then the lockers are the way to go. All of these stations have luggage checking services, केही आत्म-सेवा.
तपाईं बीच € 10 र € 15 प्रति दिन भुक्तानी गर्न आशा गर्न सक्छौं, औसत मा. एउटा सानो पक्ष टिप्पणी रूपमा, रेलवे स्टेशन दिनको लागि खाना र पानीमा भण्डारनको लागि पनि उत्कृष्ट हो, बाइक भाँडामा र पैसा चित्रकला.
मिलन मा स्टेशनहरु
ट्रेनहरू यूरोप र मिलनमा जानको लागि सबैभन्दा सुविधाजनक तरीका हो, त्यहाँ चार मुख्य रेल स्टेशनहरू छन्, मिलानो Lambrate, मिलान Rogoredo, मिलानो Centrale र मिलान Porta Garibaldi.
हामी पहिले भने जस्तै, यसलाई जब तपाईं कदम मा हो ठूलो आवश्यकता छ किनभने त्यहाँ सेवा प्रदायकको कुनै कमी छ.
इटालीमा बायाँ सामानको लागि अधिकतम भण्डारण समय र घण्टा बिभिन्न स्टेशनहरू फरक हुन्छन् र तपाईंले प्रति दिन औसत € १० देखि १€ डलर सम्म तिर्नुहुनेछ।. त्यहाँ पनि वजन प्रतिबन्ध हुन सक्छ, केहि केसहरूमा डबल-चेक गर्न निश्चित हुनुहोस्.
भेनेजिया सान्ता लुसिया भेनिसको केन्द्रीय रेल स्टेशन हो र इटालीमा बाँया सामानहरूको लागि विकल्पहरूको अधिकता छ।. मिलान र रोम जस्तै, भेनिस प्रस्तावहरु उचित मूल्यको बाँया सामान भण्डारण.
केही वजन मतभेद र सम्भव समय मतभेद हुनेछ. आत्म-सेवा लकर पसलहरूमा सुविधाजनक भेनिस भन्दा सबै राखिएका छन्.
जेनोवा टिकटमा मिलान
जेनोवा टिकटहरु रोम
जेनोवा टिकटहरूमा फ्लोरेन्स
भेनिस जेनोआ टिकटहरू
बाँया सामान स्थानहरू होटेलमा शहर वरिपरि
तपाईंको कल पहिलो पोर्ट आफ्नो होटल हुनेछ, छात्रावास, वा बाँया सामानको स्थानको लागि एयरबएनबी. तपाईं जाँच गरेपछि, किनभने धेरै प्रतिष्ठानबाट निःशुल्क बायाँ सामान राख्न हुनेछ सोध्न नडराऊ. यसको सामान्यतया केवल समय को एक निश्चित रकम लागि त ती सान्दर्भिक विवरण प्राप्त गर्न निश्चित हुन.
Safes र लकर लागि विकल्पहरू बारेमा अगाडि डेस्क मा सोध्नु. तपाईं एक भरिया आफ्नो सामान दिन भने एउटा सानो टिप छोड्ने.
मिलान रोम टिकटहरु
रोम टिकटमा फ्लोरेन्स
पिसामा रोम टिकटहरू
रोम टिकटमा नेपल्स
बाँया सामान निजी सेवाहरू
तपाईंको बैग Stow
यो एक लोकप्रिय युरोपेली विकल्प छ र एक तारकीय प्रतिष्ठा छ. हामी इटाली मा केन्द्रित हुनुहुन्छ र तिनीहरूले रोम मा शाखा छ, मिलान, फ्लोरेन्स, नेपल्स, ओस्लो, केटानिया, र बारी, इटाली र यसको famed शहर को सबै कवर पक्का गर्न. आत्म-सेवा एक महान विकल्प छ.
जोगिन रेखा र 24 घण्टे निगरानी को र सबै भन्दा महत्वपूर्ण ले लाभ, आफ्नो झोला गर्न € 300 अप लागि बीमा छ.
सामान भण्डारण कार्यालय
यो भेनिस एउटा बायाँ सामान विकल्प निर्दिष्ट छ.
तपाईंले तिनीहरूलाई भेनिस मार्को पोलो एयरपोर्टको आगमन हलमा भेट्टाउनुहुनेछ, को भेनिस सान्ता लुसिया रेलवे स्टेशन, पियाजाले रोमा, र भेनिस क्रूज टर्मिनल. यो चलाखीपूर्ण यातायातका क्षेत्रमा राखिएको छ. यो यो आदर्श विकल्प ड्रप र जाने बनाउँछ.
मिलान भेनिस टिकटहरु
पादुआदेखि भेनिस टिकटहरू
बोलोग्नादेखि भेनिस टिकटहरू
रोमदेखि भेनिस टिकटहरू
जब तपाईं इटाली यात्रा र बायाँ सामान स्थानहरू आवश्यक, यसैले अगाडि जाँच गर्न महत्वपूर्ण छ तपाईंको यात्रा. पटक चेक, वजन प्रतिबन्धहरू जाँच गर्नुहोस्, र लागत जाँच गर्नुहोस्, तयार होउ! सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, इटाली आनन्द, सामान निःशुल्क.
संग टाँसिनुहोस् एक ट्रेन सेव सबै भन्दा राम्रो टिकट विकल्पहरू उपलब्ध हुन सर्वोत्तम मूल्यहरूमा उपलब्ध!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “इटालीमा बाँया लगेज स्थानहरू र तिनीहरूलाई कसरी पत्ता लगाउने” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fleft-luggage-locations-italy%2F%0A%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
निम्न लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- यो लिंक अंग्रेजी मार्गहरू अवतरण पृष्ठ लागि हो, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, र तपाईं एनआरलाई फर वा ट्रीमा र तपाईंको छनौटको अधिक भाषाहरू बदल्न सक्नुहुन्छ.
europetravel eurotrip बायाँ सामान longtrainjourneys सुटकेसहरू रेल यात्रा यात्रा
ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
प्रतिष्ठित चर्च र गुम्बा युरोप मा